Mpandraharaha mitahiry voamboana na “Palissandre” Asain’ny minisitera manao tombana
Fihariana anaty valan’aretina Misy ny maty antoka, ao koa ireo mahazo tombony
Maro be ireo sehatra mahita faisana amin’ity aretina Coronavirus ity. Anisan’ny loha laharana amin’izany ireo mpisehatra rehetra amin’ny fizahantany.
Coronavirus Mafy ny krizy ara-toekarena aterany
Saika ny krizy entin’ny aretina coronavirus avokoa ny firenena manerana ziao tontolo izao eny fan a ireo tsy ahitana ny valan’aretina aza nohon’ny fijanonan’ny fifanakalozana ara-barotra.
Banky Foiben’i Madagasikara Mitohy ny asa aman’andraikitra
Nanao fanambarana ny Banky foiben’i Madagasikara (BFM) fa mitohy hatrany ny asa aman’andraikiny na dia eo aza ny fisian’ny valan’aretina Coronavirus. Afaka mbola mamatsy vola hatrany izy ireo ho fampandrosoana ara-toekarena ary nanamafy ny tsy maintsy hiara-miasa amin’ireo mpisehatra amin’ny banky.
Fifandraisana sy fifanakalozana Ifandrombahana ny “Crédit” , mahazo tombony ny “Money Banking”
Manomboka miha ritra ny fahana finday (crédit) eny anivon` ireo tsena mpaninjara vokatry ny fisian` ny aretina COVID-19 eto amintsika. Maro mpanjifa no nanao tahiry fahana nandritra ny andro maro, hoy ny fanazavana nataon` I Jacky, mpivarotra “épicerie” etsy Ampitatafika.
Brieville Mitaky ny karamany ireo mpiasan'ny Kraoma
Mitohy ny krizy eo anivon'ny orinasam-panjaka Kraoma. Nikorontana noho ny fasintahan'ny mpiara-miombon'antoka Rosiana ilay planina fanerenana saika ho hatao izay nahatonga an'ireo mpiasa hitaky ny
Fiatrehana ny Coronavirus Misongadina ny fahantran’ny Malagasy
Toa hita tsy taitra ihany ny ankamaroan’ny Malagasy manoloana ny aretina malaza sy mandringana eran-tany coronavirus. Vao maraina dia maro be no nirodorodo mbola nivoaka hitady vola na dia tsy nisy aza ireo taxibe nifamezivezena.
Famatsian-tsolika Ampy ny filàna, tsy tokony hikoropaka
Nanamafy ny Ofisim-pirenena momba ny akoran’afo fa milamina sy mirindra tsy misy ahiana ny famatsiana solika ny nosin-tsika nanomboka ny faran’ny taona 2019. Misy drafitra maty paika narahan’ny mpiantsehatra rehetra ka mizotra tsara ny fanafarana, ampy ny fitaovam-pitaterana toy ny sambo,
Voavoly ny velaran-tany 40.000 ha. Tsy nisy na bolabola 1 aza naondrana. Toy izany koa ny tsy fisiana trafikana hazo sarobidy. 245 isa ireo sokatra hiverina etsy Ivato anio (TTF: omaly) rehefa tra-tehaka tao Kaomoro.
Ireo no namehazan’ny minisitry ny tontolo iainana, Alexandre Georget Rabearisoa, ny asa vitan’ny minisiterany tao anatin’izay 6 volana izay tetsy Nanisana omaly. Hojerena amin’izay manomboka izao ny fahafahan’ireo mpanao asa tanana Malagasy manatanteraka ny asany an-kalalahana ary antony nanirahana tompon’andraikitra any Geneve hiverina eto ny 29 aogositra io hifampidinika mikasika ilay sazy azontsika tamin’ny CITES farany teo, hoy izy. Tsy azo ekena intsony ny fanondranana hazo sarobidy any ivelany saingy tsy hasiana olana kosa ny fanapahana kininina sy “Pin” rehefa tsy anaty ala arovana. Ampirisihina aza, hoy izy, ny tompon’ireny toerana manokana ireny mba hamboly hazo hatrany haharetan’ilay fihariana na asa tanana io na saribao. Miantso ireo mpandraharaha izay mitahiry hazo voamboana na “Palissandre” kosa, hoy izy, mba hamoaka izany hanaovana tombana na “inventaire” satria manana maromaro isika. Ao Menabe, ohatra, misy 82m3, Mahajanga : 49 kaontenera amina 17m3.